Power Inverter, Solar Charge Mutongi, Shanduko Yesimba Magetsi - Leyu
Isu Leyu yakavambwa muna 2005, kunyanya kuburitsa AC kuenda kuDC, DC kuenda kuDC switching magetsi, kubvisa grid tai yakanyanya kushanda simba inverter, rezuva mutariri wechaji, scrolling system uye rotary switch. Izvo zvigadzirwa zvinogamuchirwa neEC ROHS CCC chitupa. Bhizinesi redu rakagamuchirwa ne ISO9001. Kubva pakutenda kwekutenda "Funga nezvevatengi", "uchiziva kugutsikana kwevatengi" sebasa redu chinangwa.
350W Imwe Kubuda Kunoshandura Simba Rinopa S-350 dzakateedzana
60W Imwe Kubuda Kwemaindasitiri DIN Rail Power Supply DR-60 Series
75W Imwe Kubuditsa UPS Kushanda Simba Kugovera SCP-75 Series
100W Imwe Kubuda Kunochinja Simba Rinopa LRS-100 Series
Taura nesu kuti uwane mamwe masampuli
Maererano nezvaunoda, gadzirisa iwe, uye kukupa mharidzo
Leyu kambani iri nyanzvi mukugadzira switching magetsi, inverter yemagetsi, mutyairi wezuva mutariri, scrolling system uye rotary switch kweakawanda makore.60,000 mauniti / mwedzi ndiyo yedu yakajairwa yekugona kugona.
Izvo zvigadzirwa zvinogamuchirwa neEC \_ ROHS \_ CCC \_ chitupa. Bhizinesi redu rakagamuchirwa neIO 9001.
Kambani yedu ikozvino ine tsvimbo dzinopfuura makumi matanhatu, mainjiniya mashanu, vatengesi gumi vekutengesa kunze, nyanzvi yekugadzira inobvuma kugadzirisa uye OEM.
Zvizhinji zvezvigadzirwa zvedu zvakajairika zviripo, tinogona kuendesa mukati memazuva maviri ebasa, yakakosha modhi inoda mazuva gumi nemashanu ekushanda.Kune hukuru hwakawanda kuraira 3-5 mavhiki anotungamira-nguva inodiwa.
162018 / Ndira
Anodiwa Mutengi, Tinokuyeuchidza kuti mafekitori mazhinji kuChina achamira kushanda panguva yeMutambo weChirimo. Leyu mazororo achatanga kubva musi wa4 Kukadzi kusvika 25, Kukadzi muna 2018. Nekudaro, zvese ...
2018 Chitubu Mutambo Zororo Ziviso
252018 / Ndira
2018 Resume Nguva Mushure Mutambo Wematsutso
Anodiwa Mutengi, Takasarudza kutangazve basa mushure memwaka wakareba weChirimo musi waFebruary 27. Panguva iyoyo, unogona kunzwa wakasununguka kuti utaure nesu nezve mirairo yako mitsva. Nekuti vatengi vazhinji vakaisa odha pamberi pemutambo, fekitori yedu ichave yakabatikana zvikuru. Kana iwe uchida magetsi, inverter yemagetsi nezvimwe, ...
272018 / Kukadzi
LEYU Kudzokera Kubasa
Vadiwa Vatengi, Mushure menguva yakareba yemuchirimo, LEYU yadzoka kuzoshanda nhasi (Kukadzi 27th). Gamuchirai mibvunzo yenyu pamusoro pemagetsi, inverter yemagetsi, nezvimwe. Zvamunobvunza zvichapindurwa mukati memaawa gumi nemaviri. Ndatenda. Leyu yekutengesa timu
Dc Push Button Chinja, Lw26gspad-Lock Rudzi Rwunoshandura, Chaja Mutyairi Solar, 60 amp wezuva wekuchaja mutariri, solar bhatiri charger controller, Solar Simba Shanduri,